Budata Box Office Tycoon APK maka Android
Budata Box Office Tycoon
Budata Box Office Tycoon,
Bụrụ onye isi ọhụụ na ụlọ ọrụ ihe nkiri: Mee alaeze nkiri na Hollywood nke ga-emepụta fim ma mee ka ọtụtụ nde mmadụ lee ha anya. Ọ bụrụ na-amasị gị egwuregwu Idle Tycoon Management, ihe nkiri ọhụụ a na-eme egwuregwu ga-agbafu gị. Nweta ego ka alaeze gị na-etolite ma mee ka ndị mmadụ lelee ihe nkiri ọhụrụ.
Ike gwụrụ ịbụ onye na-egwuputa ihe ma ọ bụ onye ọrụ ugbo ma ọ bụ iwu ogige ntụrụndụ, mgbatị ahụ, obodo, nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ụlọ mkpọrọ, nri ma ọ bụ alaeze nkwari akụ? Yabụ ị dịla njikere ịbụ onye Hollywood na -achitere ihe nkiri ọhụụ?
Thelọ ihe nkiri nkiri ị na-akwado na-aga nihu na-eweta ego ọbụlagodi mgbe ị na-anọghị nịntanetị ma ọ bụ na ị nweghị mmasị na egwuregwu ahụ. Lelee ka ndị ahịa na-emekọ ihe nkiri sịnịma gị ma leba anya na mmeghachi omume ha na fim. Mee arcades, karaoke, ihe nkiri, ụlọ ọrụ tiketi na ndị ọzọ.
Bụrụ onye ọchụnta ego ihe nkiri: bido azụmahịa nke gị, kpata ego wee bụrụ onye kacha mma nkiri nkiri nụwa!
Box Office Tycoon Ụdịdị
Mmepụta: Hothead Games